Ungadala kanjani ama-backlink ngendlela engcono kakhulu?
Njengomkhuba wokubonisa, ochwepheshe abaningi be-SEO kanye nokuqala kwe-intanethi bagxila yonke imizamo yabo ekutholeni ama-backlink amahle. Umbuzo yingakho begxila kakhulu ekwakheni isixhumanisi kunamanye amasu okuthuthukisa? Ngami njengochwepheshe onguchwepheshe we-SEO, impendulo isobala. Wonke umuntu ofuna ukukhulisa ama-rankings awo emibhalweni yokuphambisana, kudingeka adalwe iphrofayili eqinile. Uma kungenjalo, akukho phuzu ekwakheni ibhizinisi ku-intanethi ngoba imizamo yakho ngeke ihlonishwe amakhasimende akho angakhona.
Kodwa-ke, kufanelekile ukuphawula ukuthi akuzona zonke izixhumanisi zangemva kokudala ezenziwe ngokulinganayo. Kuningi le-hat-black SEO "ochwepheshe" abangathanda izinjini zosesho futhi banikeze okufiselekayo okuvumelekile. Yingakho kufanele uqaphele lapho ucinga amathuba okukwakha isixhumanisi esakhiweni sakho. Udinga ukugwema amapulazi okuxhumanisa, imithombo yokuxhumanisa ye-spammy nezinkampani ezidala izixhumanisi zangaphandle ngokuzenzakalelayo. Zonke lezi zindlela zokwakha izixhumanisi zokukhwabanisa zingatholakala nge-Google. Kulesi simo, isayithi lakho lizothola izigwegwe esikhundleni sokuxuba ijusi.
Umbuzo wokuqala ofika ekuqaleni kochwepheshe we-SEO "Yiyiphi indlela engcono kakhulu yokwakha izinga eliphezulu le-backlink?" ukusho impendulo yalo mbuzo namanje kunzima ukutholela abaphathi bewebhu abanolwazi.
Uma u-Google it, uzothola amaqhinga amaningana ayisisekelo, amaningi awo angenayo inani elifanayo ngaphambili. Kungachazwa yizinguquko eziqhubekayo ezimakethe zedijithali eziholela ezindleleni ezintsha nezindlela eziphumelelayo zokuthola i-backlinks.
Kulesi sihloko sizoxoxa kuphela ngezindlela ezinhle nezindlela ezintsha zokwenza ama-backlink aphezulu. Lezi zindlela zokwakha izixhumanisi zizohlala zangempela ngonyaka ozayo futhi. Ngakho ake sixoxisane ngamaqhinga asebenza manje.
Izindlela ezinhle zokudala ama-backlink
Ngamanye amazwi, abasebenzisi ukunakwa nokudumisa. Kungokwemvelo kwabiwe nge-intanethi ngenxa yekhwalithi yayo ephezulu nokusebenza. Ukuthi indlela elula futhi engcono kakhulu yokudala ama-backlink eziphilayo ukukwenza okuqukethwe okuphoqeleka okuhambisana nemiboni yakho yezindaba ukuthi abantu bayakujabulela kakhulu i-tweet, njenge-blog, nokubeka amazwana ongakwazi ukubeka phezulu ekhasini lokuphumela losesho ngamagama angukhiye ahlosiwe amaningi. Sebenzisa ukuxhumanisa ukuhamba bese udala okuqukethwe kwakho nezilaleli zakho ezihlosiwe engqondweni. Uma ungayenza njalo, abalandeli bakho abahlala njalo nabasha bazoguqula amakhasimende avamile futhi akhokhelayo, okwenza umkhiqizo wakho uthandeke ku-niche yakho.
Ungakholelwa kubantu abathi izimakethe zokuthengisa zifile. Empeleni kusasebenza kakhulu ebhizinisini lakho. Ukukhangisa kwe-Article kungenye yezindlela zokuqamba ukuxhumana eziphumelela kakhulu ezisetshenziselwa abathengisi kanye nochwepheshe be-SEO kulezi zinsuku.
Isici esibucayi sokwemakethe yokukhangisa ivolumu. Kufanele wenze izinombolo ezibalulekile zezihloko, ukuthola amaphesenti aphezulu we-backlinks. Kufanele ulungele ukuthi ukuhambisa ama-athikili amaningana ngeke kufake isayithi lakho liphakeme ebusuku. Udinga ukwenza okuningi okuthunyelwe njalo ukuze uthole umphumela oyifunayo.
Ukwenza kube lula inqubo yokuthumela, ungasebenzisa isofthiwe e-intanethi engayenza ngokuzenzakalelayo. Ngokwesibonelo, i-Article Marketing Robot izokwenza konke okusemandleni akho ngendlela engcono kakhulu. Konke okudingayo ukufaka ulwazi lwakho kuwo futhi uvumele ukuthi lugijime Source .